ပြောင်းလဲခြင်း - အခန်း (၉) | Shwe Canaan TV
Shwe Canaan TV
ပြောင်းလဲခြင်း - အခန်း (၉)
00Unknown Sunday,5February 2012
HOW TO CHANGE? လူဟောင်းအကြောင်းနဲ့ လူသစ်အကြောင်း အခြေခံကျတဲ့ အချက်တစ်ချို့ကို လေ့လာပြီးတဲ့နောက်၊ လူဟောင်းဘဝကနေ လူသစ်ဘဝကို ဘယ်လိုပြောင်းလဲနို...
လူဟောင်းအကြောင်းနဲ့ လူသစ်အကြောင်း အခြေခံကျတဲ့ အချက်တစ်ချို့ကို လေ့လာပြီးတဲ့နောက်၊ လူဟောင်းဘဝကနေ လူသစ်ဘဝကို ဘယ်လိုပြောင်းလဲနိုင်မလဲ ဆိုတဲ့အချက်ကို ဆက်ပြီးပြောပြချင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ လူဟောင်းနဲ့လူသစ်ဟာ နည်းနည်းပါးပါးမဟုတ်ဘဲ လုံးဝကို ဆန့်ကျင်ကွာခြားလှပါတယ်။
ဇာတိပကတိမွေးသောအရာသည် ဇာတိ ပကတိဖြစ်၏။
ငါတို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် စပ်ဆိုင် သည်ကို၎င်း၊
လောကီသားအပေါင်းတို့သည်မာရ် နတ်လက်၌ရှိကြသည်ကို၎င်း၊ ငါတို့ သိကြ၏။
ထိုကာလအခါ မြေမှုန့်၌ အိပ်ပျော် သော သူများတို့သည်နှိုးကြလိမ့် မည်၊အချို့တို့ကား ထာဝရ အသက် ရှင်ခြင်းနှင့်ゞင်း၊
အချို့တို့ကား ရှက်ကြောက်ခြင်း၊ ထာဝရ အသရေပျက်ခြင်းနှင့်၎င်း၊ နှိုးကြလိမ့်မည်။
ကောင်းသောအကျင့်ကို ကျင့်သော သူ တို့သည် အသက်ရှင်ရာ ထမြောက် ခြင်းသို့၎င်း၊
ဆိုးယုတ် သောအကျင့်ကိုကျင့်သော သူတို့သည် အပြစ်စီရင်ရာ ထမြောက် ခြင်းသို့၎င်း ထွက်ရကြလတ္တံ့။
လူဟောင်းနဲ့ လူသစ်ဟာ –
- စတင်ဖြစ်ဖွါးပုံမတူ (DIFFERENT ORIGIN)
- အသက်ရှင်ပုံမတူ (DIFFERENT LIVING)
- ဦးတည်ရာအရပ်မတူ(DIFFERENT DESTINY)
(က) လူကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ လုပ်ယူလို့ လုံးဝမရနိုင်ပါ
မျောက်တစ်ကောင်ဟာ လူနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးတူအောင် ကြိုးစားလို့ ရချင်ရမယ်။ ဒါပေမယ့် လူဖြစ်အောင်တော့ ဘယ်လိုမှ ကြိုးစားလို့မရနိုင်ပါ။ ဒီလိုပါပဲ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့လည်း အကျင့်စရိုက်တွေ၊ စိတ်သဘောထားတွေတတ်နိုင်သလောက် ကြိုးစားပြီး
ပြုပြင်လို့ရနိုင်ပေမယ့် လူဟောင်းဖြစ်နေတာကိုတော့ လူသစ်ဖြစ်လာအောင် ဘယ်နည်းနဲ့မှ ကြိုးစားလုပ်ယူလို့ မရနိုင်ပါ။
ယေရမိ၊ ၁၃း၂၃ မှာ –
ကပ္ပလီတစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့အသားရောင် ပြောင်းသွားအောင်၊ ပြီးတော့ကျားသစ်ဟာ သူ့ကိုယ်ပေါ်က အကွက်ကျားတွေ ပျောက်သွားအောင် မလုပ်နိုင်သလို လူဟာလည်း ကိုယ့်အပြစ်ကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် မပြုပြင်နိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ အပြစ်တွေကို ကြိုးစားရှောင်ရှားနိုင်ရင်တောင် အပြစ်တွေကိုတော့ မပြုပြင်နိုင်ပါ။
လူဆိုးကနေ လူကောင်းဖြစ်လာရုံလောက်သာ ကြိုးစားအားထုတ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ကြပေမယ့် လူဟောင်းကနေ လူသစ် ဖြစ်လာအောင်တော့ မကြိုးစားနိုင်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် လူကောင်းတော့ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ လူသစ်တော့ မဖြစ်ပါ။
အပြစ်သားအဖြစ်နဲ့ မွေးဖွားလာသူဖြစ်တာကြောင့် အပြစ်နဲ့ကင်းစင်အောင်လည်း ဘယ်လိုမှနေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အခုကစပြီး အပြစ်မလုပ် တော့ဘဲ နေနိုင်မယ်ထားပါဦး၊ အရင်အချိန်တွေမှာ အပြစ်တွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့အတွက် အပြစ်ကင်းတဲ့ အသက်တာကတော့ မဖြစ်နိုင်တော့ကြောင်း ထင်ရှားနေ ပါတယ်။ တိပ်ခွေထဲမှာ အသံသွင်းနေတုန်း မှားသွားရင် အဲဒီအမှားကိုပြုပြင်ရင်း အမှန်ကိုပြန်သွင်နိုင်ဖို့အတွက် တိပ်ခွေကို ပြန်ရစ်ရတယ် မဟုတ်လား။ ဒါပေမယ့် ခက်တာက ကျွန်တော်တို့ ဘဝတွေကို တိပ်ခွေလို ပြန်ရစ်လို့ မရနိုင်တဲ့အတွက် မှားပြီးခဲ့တာတွေကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ဖျက်ပစ် လို့မရနိုင်တာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီနေ့လုပ်တဲ့ကောင်းမှုဟာ ဒီနေ့အတွက် တာဝန်ကျေရုံမျှလောက်သာ ဖြစ်တာပါ။
အပြစ်နဲ့မကင်းနိုင်သလို စာတန်လက်ထဲကနေလည်း မလွတ်နိုင်ပါဘူး။ တစ်လောကလုံးဟာ စာတန်ရဲ့အုပ်စိုးမှုအာဏာအောက်မှာ ရှိနေတာ ကြောင့် လောကီသားဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ စာတန်လက်ထဲက လွတ်အောင်အဘယ်အရပ်ဒေသကို ထွက်ပြေးနိုင်မှာလဲ။ ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းပြီး အကောင်းဆုံးကျင့်နေသူတွေတောင် စာတန်ရဲ့သားတွေပဲ ဖြစ်တယ်လို့ ကျမ်းစာမှာ ဖော်ပြထားတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ် (ယော၊၈း၄၄)။ ဝိညာဉ်သေနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရှင်သန်လှုပ်ရှားနေတယ်လို့ မြင်နေပေမယ့် ဘုရားရဲ့အမြင်မှာတော့ အသေကောင်မျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။ သေနေသူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘာလုပ်နိုင်မလဲ။ ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် လူဟောင်းဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးစားကျင့်ကြံသမျှတွေကို “သေခြင်း နှင့်ဆိုင်သောအကျင့်(DEAD WORKS) လို့သာ မှတ်ယူပါတယ် (ဗြဲ၊၆း၁။ ၉း၁၄)။
“အဝတ်ဟောင်းကို အထည်သစ်နှင့် ဖာလေ့မရှိ” လို့ မဿဲ၊၉း၁၆မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ အဝတ်မှာ အပေါက်အပြဲတွေ ရှိနေတယ်။ ဒီအဝတ်ဟောင်းကို ဘယ်လိုပဲပြုပြင်ဖာထေးပြီး လျှော်ဖွတ်နေပါစေ အသစ်တော့ပြန်ဖြစ်မလာနိုင်တော့ပါ။ ကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့ ဘဝဟာ လည်း ဟောင်းနွမ်းဆွေးမြေ့ခြင်းနဲ့ ပျက်စီးယိုယွင်းခြင်းသာ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ကိုယ်ကိုယ်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး ပြုပြင်ဖာထေးနေရတဲ့ သဘောကို တွေ့မိပါ လိမ့်မယ်။ နည်းနည်းသက်သာပြီး ကြည့်ကောင်းရှုကောင်းရုံလောက်သာ အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြုပြင်ထားရတာဖြစ်ပေမယ့် အသစ်နဲ့တော့ တစ်ခြားစီပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဟောင်းနွမ်းဆွေးမြေ့ခြင်းတရားနဲ့ ဆိုင်တဲ့ဘဝကို ကောင်းနိုးရာရာတွေ ရှာပြီးပြုပြင်ဖာထေးနေရတဲ့ ကျွန်တော်တို့အတွက် အလိုအပ်ဆုံးကတော့ ပြုပြင်ဖာထေးစရာ လုံးဝမလိုဘဲ ဟောင်းနွမ်းဆွေးမြေ့ခြင်းနဲ့ ထာဝစဉ်ကင်းလွတ်တဲ့ ဘဝသစ်ပဲမဟုတ်လား။
အမှတ်တမဲ့နေသူတွေတော့ မသိဘူး။ လေးလေးနက်နက် ဆန်းစစ်သူတွေ အနေနဲ့တော့ မိမိကိုယ်မိမိ ဘယ်လောက်ဟောင်းနွမ်းဆွေးမြေ့နေတယ် ဆိုတာကို ကြည့်လေမြင်လေပါပဲ။ လူဟောင်းဘဝအကြောင်း သဘောပေါက်လေလေ လူသစ်ဘဝကို လိုလားတောင့်တလာလေလေဖြစ်မှာ သေချာပါတယ်။
ဆာလံ၊၁၀ရး၉ မှာ “တောင့်တသောဝိညာဉ်ကို ရောင့်ရဲစေ၍ မွတ်သိပ်သော ဝိညာဉ်ကိုလည်း ကောင်းသောအရာနှင့် ဝစေတော်မူ၏” လို့ ဆိုထားပါတယ်။
လူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာမိမိရဲ့ ပင်ရင်းပင်မြစ်ဖြစ်တဲ့ ဘုရားနဲ့ကင်းကွာနေကြောင်း သဘောပေါက်လာပြီး မိမိဝိညာဉ်အတွက် အမှန်တကယ် ဘုရားကို လိုအပ်တဲ့အကြောင်း သိမြင်လာသူတွေအတွက် ဝမ်းသာစရာအချက် ဖြစ်ပါတယ်။
ရောမ ၂းရ မှာလည်း “ကောင်းသောအကျင့်ကို အမြဲကျင့်၍ ဘုန်းအသရေကိုလည်းကောင်း မဖောက်ပြန်သော ဇာတိကိုလည်းကောင်း ရှာသော သူတို့အား ထာဝရအသက်ကို ပေးတော်မူလတ္တံ့” လို့ဆိုပြန်ပါတယ်။ ထာဝရအသက်ကိုရဖို့အတွက် ကောင်းသောအကျင့်ကို အမြဲကျင့်ရမယ်လို့ အများက ယူဆထားကြပါတယ်။ ကျင့်ရမှာပေါ့၊ မကျင့်ရင်ဘယ်ဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ ခံယူချက်တွေရှိနေသူတွေကတော့ ကောင်းသောအကျင့်ကို အမြဲကျင့်ဖို့ဆိုတာ လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်း၊ မိမိဟာ ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ ဇာတိအားဖြင့်သာ ဖြစ်ဖွားလာသူမို့ မဖောက်ပြန်နိုင်တဲ့ဇာတ်(အဖြစ်သစ်)ကို လိုအပ်ကြောင်း ထင်ထင်ရှားရှား သိမြင်လာကြမှာ သေချာပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ထာဝရအသက်ဟာ သူတို့နဲ့ သိပ်မဝေးတော့ပါဘူး။ အထက်က ကျမ်းပိုဒ်တွေမှာ –
ရောင့်ရဲစေ၍ ဝစေတော်မူ၍ ပေးတော်မူလတ္တံ့ ဆိုတဲ့ စကားတွေကို သတိထားမိလိုက်ပါ။ ဒီစကားတွေက ဘုရားလုပ်ရပ် (လုပ်ဆောင်တော်မူချက်)ကို ဖော်ကျူး လှစ်ဟထားပါတယ်။
(ခ) ဘုရားသခင်က လုပ်ပေးပြီးပါပြီ
ထာဝရဘုရားသည် ငါတို့အဖို့ ကြီးသောအမှုကို ပြုတော်မူပြီ (ဆာလံ၊ ၁၂၆း၃)။
လူဟောင်းကနေ လူသစ်အဖြစ်ကို ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာ အတိုင်းအဆမရှိ ကြီးမားတဲ့ အမှုကြီးဖြစ်တယ်။ ဒီအမှုကို ဘယ်လူသားကမှ မပြုနိုင်ဘူး။ ဘုရားသခင်ရဲ့ အကူအညီနဲ့လည်း မပြုနိုင်ဘူး။ ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင်က အကူအညီလုံးဝမပါဘဲ ပြုတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားလုပ်ရပ် သက်သက်ပါ (သားတော်အားဖြင့် ပြုတော်မူခဲ့တာပါ)။
ဘုရားသားတော် သခင်ယေရှုဟာ လူ့ဇာတိကို ခံယူပြီး လူအဖြစ်နဲ့လောကကို ကြွလာခဲ့တယ်။ သခင်ယေရှုရဲ့ သက်တော်စဉ်နဲ့ အံ့ဖွယ်အမှုတွေ ကို ခရစ်ဝင် (မဿဲ၊ မာကု၊ ယောဟန်)ကျမ်းတွေမှာ မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။ ကိုယ်တော်ရဲ့ လူ့ဇာတိခံယူခြင်း၊ အသေခံခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ ဆိုင်တဲ့ နက်နဲတဲ့အဓိပ္ပါယ်တွေကိုတော့ ဩဝါဒစာစောင်တွေမှာ အတွင်းကျကျ ရှင်းပြထားပါတယ်။ သခင်ယေရှုကို ၁ကော၊၁၅း၄၅ မှာ နောက်ဆုံးအာဒံလို့ ဖော်ပြပြီး ၁ကော၊၁၅း၄၇ မှာ ဒုတိယလူလို့ ဆိုထားပါတယ်။
နောက်ဆုံးအာဒံဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်က အာဒံရဲ့ အမျိုးအနွယ်ဖြစ်တဲ့ လူဟောင်းဘဝ အဆုံးသတ်ချုပ်ငြိမ်းခြင်းနဲ့ဆိုင်ပြီး ဒုတိယလူ ဆိုတာကတော့ လူသစ်ဖြစ်ဖွားစေခြင်းနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ သခင်ယေရှုရဲ့ ဖွားမြင်ခြင်း၊ အသေသတ်ခံခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတို့ဟာ ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ အေဒီ –- ဘီစီဆိုပြီး ကမ္ဘာ့သက္ကရာဇ်ရဲ့ ဗဟိုချက်ဖြစ်ခဲ့သလို လူသားများအတွက် လူဟောင်းဘဝကနေ လူသစ်ဘဝကို ပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့ ဗဟိုချက်လည်း ဖြစ်တယ်။
သခင်ယေရှု အသေသတ်ခံရခြင်းဟာ သမားရိုးကျ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ သခင်ယေရှု သေရခြင်းဟာ အပေါ်ယံစဉ်စားကြည့်ရင် ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ လူမျိုးရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြစ်မှုလို့ ယူဆနိုင်ပေမယ့် အတွင်းကျကျ လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ လူသားထုတစ်ရပ်လုံးရဲ့ ဝိညာဉ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ ပြစ်မှု ကြီးဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့လူဟောင်းဘဝကနေ ချုပ်ငြိမ်းလွတ်မြောက်ဖို့အတွက် အသေခံရခြင်းဖြစ်လို့ပါ။
ယေရှုရဲ့သေခြင်းဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူဟောင်းဘဝသေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ယေရှုခရစ်အထဲမှာ ရှိနေလို့ပါ။
၁ကော၊၁း၃၀ မှာ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ကို ယေရှုခရစ်တော်ထဲမှာ ထည့်ပေးထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဘုရားက ထည့်ပေးထားလို့သာ ယေရှုခရစ်အထဲကို ရောက်ရတာပါ။
ဘုရားလုပ်ရပ် - ယေရှုခရစ်နဲ့ ထပ်တူထပ်မျှဖြစ်စေခြင်း (IDENTIFICATION WITH CHRIST)
ရောမ၊ ၆း၆ မှာ “ငါတို့၏ လူဟောင်းသည် ထိုသခင်နှင့်အတူလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေသတ်ခြင်းကို ခံပြီး” လို့ ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း သခင်ယေရှုရဲ့ သေခြင်းဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူဟောင်းဘဝ သေဆုံးချုပ်ငြိမ်းခြင်းဖြစ်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပြီးတော့ - –
ရောမ၊၆း၄ ကို ပြန်ကြည့်တဲ့အခါ “ခရစ်တော်သည် ခမည်းတော်၏ ဘုန်းတန်ခိုးအားဖြင့် သေခြင်းမှ ထမြောက်တော်မူသည့်နည်းတူ ငါတို့သည် လည်း အသစ်သော အသက်တာ၌ ကျင်လည်ရကြသတည်း” လို့ ဆိုထားပြန်ပါတယ်။ ဒီတော့ ခရစ်တော်သေခြင်ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူဟောင်းဘဝ ချုပ်ငြိမ်းအဆုံးသတ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ခရစ်တော်ရဲ့ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဟာ ကျွန်တော်တို့ လူသစ်ဖြစ်လာခြင်းပဲလို့ သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။
၁ပေ၊၃း၃ မှာလည်း “ယေရှုခရစ်ကို ထမြောက်စေတော်မူသောအားဖြင့် ငါတို့ကို တစ်ဖန်ဖြစ်ဖွာစေ...”လို့ ဖော်ပြထားတဲ့အတွက် ခရစ်တော်ရဲ့ အသေခံခြင်းနဲ့ ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းဟာ ကျွန်တော်တို့ကို လူဟောင်းဘဝကနေ လူသစ်ဘဝကို ကူးပြောင်းစေလိုက်တဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့ လုပ်ဆောင် ချက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ထင်ရှားလှပါတယ်။
(ဂ) ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ ဝန်ခံလိုက်ရန်သာဖြစ်ပါတယ်
လူဟောင်းကနေ လူသစ်ဖြစ်လာအောင် ကိုယ့်ဟာကိုယ် မကြိုးစားနိုင်ဘူးဆိုတာကို အကြွင်းမဲ့ဝန်ခံပြီးတော့ ဘုရားက လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကို လည်း အကြွင်းမဲ့လက်ခံတဲ့အပြင် ဘုရားက လုပ်ပေးပြီးပြီဆိုတာကို ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ ဝန်ခံဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိအနေနဲ့ လုံးဝမလုပ်နိုင်တဲ့အရာကို ဘုရားက အကြွင်းမဲ့ လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက် ဘုရားကျေးဇူးတော် သက်သက်ပဲလို့ မှတ်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ လူဟောင်းဘဝကနေ လူသစ်ဘဝကို ကူးပြောင်းနိုင်ဖို့အတွက် ဘုရားသခင်က -
လုပ်ပေးပြီးပြီ ဆိုတာ ကျေးဇူးတော် သာသနာဖြစ်ပါတယ် (ဧဖက်၊ ၃း၂)။
ကျွန်တော်တို့ လူသစ်ဖြစ်လာအောင် ဘုရားက လုပ်ပေးချင်တဲ့စေတနာ၊ လုပ်ပေးနိုင်တဲ့တန်ခိုးရှိရုံမက လုပ်လည်းလုပ်ပေးပြီးပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ယေရှုခရစ်၌ လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတော်သက်သက်နဲ့ လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တာကို ယုံကြည်ခြင်းသက်သက်နဲ့ ဝန်ခံလိုက်တဲ့ခါ ဘုရားလုပ်ရပ်ရဲ့ အကျိုးကို လက်တွေ့ခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကော၊၁း၁၇ မှာ “..သင်တို့သည် ကြား၍ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူတော်ကို မှန်ကန်စွာ ဝန်ခံသောနေ့မှစ၍ ထိုသို့သော အကျိုးရှိ၏” လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဧပဖြဆိုသူဟာ ကောလောသဲမြို့မှာ ရှိနေသူတွေကို ဧဝံဂေလိတရားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှင်းပြပြောဆို သွန်သင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ သူရဲ့ ဟောပြောသွန်သင်ချက်ကို ကြားရသူတွေဟာ ကြားရတဲ့တရားစကား မှန်ကန်မှုရှိကြောင်း မိမိတို့နဲ့သက်ဆိုင်မှုရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ကြတယ်။ ဒီလို ဝန်ခံတဲ့အချိန်ကစပြီး ဧဝံဂေလိတရားရဲ့ အကျိုးကို သူတို့လက်တွေ့ ခံစားရရှိတယ်လို့ ကျမ်းစာက မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ ဧဝံဂေလိတရားရဲ့ အနှစ်ချုပ်ဟာ ဘာလဲ။
၁ကော၊၁၅း၃-၄ မှာ ပါတဲ့အတိုင်း (ခရစ်တော်ဟာ ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်တို့အပြစ်ကြောင့်သေခံရခြင်း၊ သင်္ဂြိုဟ်ခံပြီးမှ ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်း သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာ ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်း)ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အတိုကောက်ဆိုရင်တော့ –
ခရစ်တော်ရဲ့ သေခြင်း၊ သင်္ဂြိဟ်ခြင်းနဲ့ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းပါပဲ။
ဧဝံဂေလိတရားရဲ့ အကျိုးက ကျွန်တော်တို့ကို –-
အဖြစ်မှ လွတ်မြောက်စေခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အပြစ်မှ လွတ်ဖို့အတွက် အသွေးတော်ဖြစ်ပြီး
အဖြစ်မှ လွတ်ဖို့အတွက်ကတော့ ကားတိုင်တော်ဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရားသခင်၏သားတော် ယေရှုခရစ်၏ အသွေးတော်သည် ငါတို့အပြစ်ရှိသမျှကို ဆေးကြောတော်မူ၏ ဆိုတဲ့အတိုင်း အသွေးတော်ကြောင့်
ငါတို့၏ လူဟောင်းသည် ထိုသခင်နှင့်အတူ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေသတ်ခြင်းကို ခံပြီဟု ငါတို့သိကြ၏ ဆိုတဲ့အတိုင်း ခရစ်တော်နဲ့အတူ သေခြင်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ လူဟောင်းဘဝက လွတ်ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဧဝံဂေလိတရားရဲ့ အကျိုးဟာ ကျွန်တော်တို့ကို အပြစ်များမှ လွတ်စေရုံမက အပြစ်နဲ့ လုံးဝကင်းစင်တဲ့ လူသစ်အဖြစ်သို့ပါ ရောက်ရှိ သွားစေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ငါဘုရားအတွက် ဘာလုပ်ရမယ် ဆိုတဲ့ (WHAT I HAVE TO DO FOR GOD) အပေါ်မှာ မရပ်တည်ဘဲ ဘုရားက ဘာလုပ်ထားပေးသလဲ (WHAT GOD HAS DONE FOR ME) ဆိုတဲ့အပေါ်မှာသာ ရပ်တည်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့် “ငါအပြစ်ရှိသမျှ လွတ်ပြီ” “ငါဟာ လူသစ်ဖြစ်ပြီ”လို့ ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ ဝန်ခံဖို့ပဲ ရှိပါတော့တယ်။
ဒီနေရာမှာ သတိထားစရာ ရှိပါတယ်။ တစ်ချို့က ငါ့အပြစ်တွေအားလုံးကို အသွေးတော်နဲ့ ဆေးပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ငါဘာပဲလုပ်လုပ်
ငရဲမကျနိုင်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့် ငါနေချင်သလို နေမယ်ဆိုပြီး တစ်ဝက်တစ်ပျက် ကောက်ချက်ချတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်နေရတာဟာ အပြစ်မှလွတ်စေ ခြင်း လောက်ကိုသာ သဘောပေါက်ပြီး လူသစ်ဖြစ်စေခြင်းအထိ သဘောပေါက်ဝန်ခံမှု မရှိကြလို့ပါ။
လူသစ်ဖြစ်ခြင်းကို သဘောပေါက်ရင်တော့ လူသစ်ဖြစ်ခြင်းအပေါ်မှာ အခြေခံပြီး အသက်ရှင်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူသစ်ရဲ့သဘောသဘာဝဟာ လူဟောင်းနဲ့တစ်ခြားစီ မဟုတ်ပါလား။
တစ်ချို့က - ကိုယ့်မှာ အပြစ်ရှိတယ်လို့ မထင်ကြဘူး။
- အပြစ်ရှိပေမယ့် လုံးလုံးလျားလျား အပြစ်သားဖြစ်တယ်လို့ သဘောမပေါက်ကြဘူး။
- အပြစ်သားဖြစ်ကြောင်း သဘောပေါက်ပေမယ့် ကယ်တင်ရှင်ရှိတာကို မသိကြဘူး။
- ကယ်တင်ရှင်ရှိကြောင်း သိပေမယ့် ဘယ်လိုကယ်တင်တယ်ဆိုတာကို နားမလည်ကြဘူး။
- ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်း သိရှိနားလည်ပေမယ့် လက်မခံကြဘူး။
- အပြစ်လွှတ်ခြင်းကို လက်ခံပေမယ့် အပြစ်နဲ့လုံးဝကင်းစင်တဲ့ လူသစ်ဖြစ်သွားပြီလို့တော့ ဝန်မခံကြသေးဘူး။
ကျွန်တော်တို့ ဝန်ခံရမှာ -
Bible with Audio
Myanmar Audio Bible
New Dream Radio
Emmaus Daily Truth
Shwe Canaan TV Channel
Shwe Canaan Facebook Page$type=social_counter
ပင်တေကော့စ်တဲလ်၏သမိုင်း (HISTORY OF PENTECOST)
အမျိုးသမီး အသင်းအုပ်​ဆိုတာ သမ္မာကျမ်းစာနဲ့ ကိုက်​ညီပါသလား။
သင်၏ ဇနီးသည်ကို အစဉ်ပျော်ရွှင်စေမည့် နည်းလမ်း (၇)ခု
© 2015 Shwe Canaan TV
ကယ်တင်ခြင်း,38,ကျမ်းစာလေ့လာနည်း,1,ချီးမွမ်းသီချင်း,2,ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္,1,ခရစ်တော် အစေခံများ,1,ခရစ်တော်၌လူသစ်,16,ခေတ်ကာလ,17,ဆရာစောကေ,3,ဆောင်းပါး,50,တရားဒေသနာ,15,ဒေသနာ,31,ဓမ္မဆောင်းပါး,37,ပင်တေကော့စ်တဲလ်၏သမိုင်း (HISTORY OF PENTECOST),1,ပေါလ်ခေကျိုင်း,5,မင်းလွင်,1,ရုပ်သံ,1,သီချင်း,2,သုတ,4,အစေတော်ခံများ,14,အထွေထွေ,20,အမေးအဖြေ,42,
Shwe Canaan TV: ပြောင်းလဲခြင်း - အခန်း (၉)
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL အပြည့်အစုံဆက်ဖတ်ပါ... Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than5weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share toasocial network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content